KOBCISO AQOONTAADA CAAFIMAAD :WAA MAXAY QAADKU? | Toggaherer's Weblog
Dadka qaarkiis, cunidda qaadku waa wax caadi ah oo waqtiga laysku dhaafi yo. Waxay ku raaxaystaan inay si hallaasi ah waqti ula qaataan saaxiibadood marka ay cunayaan qaadka. Hase yeeshee isticmaalka qaadku wuxuu dadka qaarkiis u keeni karaa dhibaatooyin. Sida daroogooyinka kale, isticmaalka xad-dhaafka ah ee qaadka waxay qofka u keeni kartaa dhibaatooyinka xagga caafi maadka iyo ladnaanta ah, iyo sidoo kale saamaynta ay ku leedahay dadka kale ee la nool sida qoyska.
Qaadku wuxuu qofka ka dhigaa mid feejigan oo fi rfi rcoon, hase yeeshee wuxuu kaloo keeni karaa dhibaatooyin badan oo caafi maad iyo hurdo la’aan, iyo sidoo kale dareenka oo kacsan.
Qaadku (oo ka mid ah qoyska geedaha loo yaqaan Catha edulis Forsk, Celastraceae family) waa geed gaaban oo caleemo cagaaran leh oo
noqda geed weyn. Caleemaha curdanka iyo curubyada geedka qaadka ayaa loo takhsiimaa in laga helo saamayn fi rfi rcoonaan iyo marqaan.
Saamaynta aan la jeclayn ama aan la doonayn ee ka dhalata cunidda qaadka waxaa ka mid ah xoog-saarista oo adkaata, dareenka oo kacsan, xasaasiyad, dareen caro iyo qaraxa rabshadda, dareenka buuqsanaanta, xanaaqa iyo kacsanaanta.
• Adkaanta seexashada
• Ciniinimada (awood darrada galmada)
• Dhibaatooyinka dheef-mareenka caloosha iyo mindhicirka sida calool-fadhiga iyo qaluulashada.
• Qowrarka afka iyo qaybaha kale ee gudaha afka
• Kansarka afka
• Miisaanka cunugga dhasha oo yaraada
• Caanaha naasaha oo yaraada ee hooyooyinka cuna qaadka
Waalidiinta, abkooyada iyo walaalaha waaweyn oo cuna qaadka waa inay ka fiirsadaan dhaqanka ay horseedayaan. Carruurtu waxay ka bartaan in badan oo dhaqankooda iyo dabeecaddooda ah eegidda iyo dhagaysiga dadka muhiimka u ah noloshooda. Haddii uu ilmuhu arko xubno qoyskooda ka mid ah oo qaadka cunaya, waxaa dhacda inay ayaguna isku dayaan sidaas oo kale.
Wali lama ogaan inay qofka ku dhacdo u-barasho (caadaysi = addiction) jidheed ama nafsiyadeed ee qaadka. Si kastaba ha ahaatee, dadka aadka u cuna qaadka (muqayaliinta ah) waxay dareemaan astaamaha u-barashada haddii ay joojiyaan qayilaadda.
Tilmaamahan soo socda waxay noqon karaan kuwo gacan ka gaysta:
• Haddii aad tahay qof si joogto ah u cuna qaadka, isku day inaad yarayso xaddiga aad ka qaadanayso, ayadoo nasashooyin macquul ah u dhaxeeyaan fadhiyada.
• Iska ilaali cabbitaannada ay ku jiraan kaafaynka sida Cola iyo koofiga. Biyo ku baddelo cabbitaannadaas.
• Iska ilaali khamriga ama daroogooyinka kale ka hor, ama ka dib fadhiga cunidda qaadka. Isku daridda daroogooyinka waxay noqon kartaa mid khatar ah.
• Haddii aad sigaarka cabto, iska yaree tirada sigaarka aad cabbayso intaad qaadka cunayso. Iska ilaali fadhiyada cirriiriga ah waxaadna furtaa dariishadaha si ay hawada fareeshka ah u soo gasho.
• Waxaad cuntaa furuud badan, khudaarta iyo cuntooyinka kale ee caafimaadka leh, waxaadna hubisaa inaad wax cunto ka hor iyo ka dib fadhiyada cunidda qaadka.
• Isku day inaad iska ilaaliso cunidda qaadka habeenkii waqtiga dambe, hana qaadan kiniiniyada hurdada in dhakhtarkaagu kuu qoro maahee.
• Iska ilaali inaad muddo dheer qaadka ku takhsiinto cankaaga, maaddaama ay tani kordhin karto khatartaada inuu afka kaaga dhaco infagshan.
• Haddii aad uur leedahay, iska ilaali inaad cunto qaadka, maaddaama ay tanna u keeni karto khatar caafimaad ilmahaaga uurka ku jira.
• Sida ugu ammaanka badan oo laysaga ilaaliyo dhibaatooyinka cunidda qaadka waa in layska daayo cunidiisa.